धु’वा र ख’रा’नी बनेर अस्ताए कन्चन तिमिल्सिना गाउँले सबैका आँखा थामिएनन् आमाको अवस्था भयो एस्तो (भिडियो) – Krazy NepaL
March 9, 2021 943
कालिका नगरपालिका–६ खोलेसिमल गुराउचौरमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका कञ्चनलाई अनिशाको परिवारले अलग गराइ दिएको थियो । उपचारका क्रममा ६६ दिनपछि उनै २१ वर्षीय कञ्चनको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । कञ्चनको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले १७ वर्षीया अनिशाको घर घेरेका हुन्।
Nextतेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ ? गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस् !
यूट्युव हेरेरै वर्षको १४ लाख कमाउने भइन् राधा